စာသင်ကြမလား- စာမျက်နှာ2— MYSTERY ZILLION
saizaw wrote: »
Yes, me too. Shall we learn.
ဟိုတစ်နေ့ကပဲ သင်ခန်းစာ Category စတာတွေ့လိုက်ရလို့ ၀င်ပြီး လက်ဆော့လိုက်သေးတယ်။
ဒီနေ့မတွေ့တော့ဘူး။ ဒီမှာပဲကျောင်းအပ်လိုက်ပါတယ်နော်။ဟိုနေ့က လက်ကမြင်းပြီး post တင်မိတာ
ကျောင်းအပ် ခဏ ရပ်ပါအုံးဗျာ...
ပထမဆုံး ဆရာ ၊ ဆရာမ လျှောက်လွှာလိုချင်တယ်
အရင်ဆုံး web site basic course စဖွင့်မယ်
course မှာ module ဘယ်၂ ခုပါလဲ...
ဆရာ ၊ ဆရာမတွေ လျှောက်ကြပါအုံး...
နောက်လ လည်လောက် စတင်ဖွင့်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်
ကိုစေတန် Web site Basic Course ဆိုတာ HTML, CSS မဟုတ်လား၊ စီခရေဇီ ရေးထားတာတွေ သူ့နာမည်နဲ့ ပြောင်း ထည့်လို့ မရဘူးလား။ သူဆက်ရေးလိမ့်မပေါ့ ..။ သူ့ကို PM ပို့ပြီး အပြီး အထိဆက်ရေးမလားလဲ မေးကြည့်မှထင်တယ်လေနော်။
Course က ဘယ်လောက် ရှိလဲ ဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။
၁. HTML Intor
၂. Starting HTML
အဲလိုမျိုး ၁ ကနေ ဘယ်လောက် ရှိမလဲ... တစ် ကနေ ၁၀ ထိလား.. ၁၅ ထိလား.. အဲဒါပဲ သိချင်တာ... နောက်ပြီး ဆရာ List တွေ တင်ပေးပါ။ register လုပ်ပေးရမှာမို့ပါ
မုန်ဖိုးမရလို့ ကျောင်းအပ်နောက်ကျသွားတာပါ....(မုန့်ဖိုး မရရင် cyber-cafe` မလာနိုင်လို့ပါ)...
သားကိုတော့ နောက်ဆုံး တစ်ယောက်အနေ နဲ့ လက်ခံပေးပါနော် နော်...ဆရာတို့နော်.....
ကိုဘီဟုတ် ကိုအုပ် သလိုအုပ်ချင်လဲ အုပ်ပါ... မလိမ်မာရင်လဲ ကောင်းကောင်းဆုံးမ ပါနော်....
နောက်ဆုံးတစ် ယောက်အနေနဲ့တော့ ကျောင်းအပ်လက်ခံပါနော် နော်.....ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျောင်တက်ပါရစေ နော် နော် ... ဆရာတို့နော်.....
Website Course အပြင်တစ်ခြားဘာသာရပ်တွေကို စိတ်၀င်စားတဲ့သူတွေပါ တက်လို့ရအောင် တစ်ခြားဟာတွေပါ ဆရာတွေခွဲပြီးသင်ပေးပါလား။ အကြံပေးတာပါ။
ကောင်းမှကောင်းပဲဗျာ။ တော်လိုက်ကြတာ။ သူများသားသမီးများ။
Web Programming အတန်းအတွက် တစ်တပ်တစ်အား ပါ၀င်သင်ကြားပေးပါရန် ကိုဒီဘီမှ အမိန့်ပေးလာပါသဖြင့် ဆရာဖြစ်လျှောက်လွှာ တင်ရပါပေသည်။
စမ်းသပ်တဲ့အနေနဲ့ Just A Knowledge ၂ ပတ် course ကို ဖွင့်လှစ်ပါတော့မယ်။
၂၆ ရက်နေ့ စဖွင့်ပါမယ်။ သင်တန်းသားများ register လုပ်ပြီး စာရင်းမြန်မြန် သွင်းကြပါ။
၂၆ ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီး ပေးသွင်းရပါမယ်။ ၂၆ ရက်နေ့တွင် စာရင်းပိတ်ပါပြီ။ :6:
PS : ဗဟုသုတမျှဝေခြင်းဖြစ်သည်။ ဘာမှ မတတ်သေးသူကိုသာ ရည်ရွယ်သည်။ တတ်ပြီးသူများ ၊ ဆရာ့ဆရာကြီး တက်ရောက်ခွင့်မရှိ။ ထိုသူများသည် ဆရာသာ လုပ်ခွင့်ရှိသည်
ကျွန်တော် php သင်မယ်ဗျာ .... အခြေခံ php သင်တန်း ပေါ့ဗျာ .... ဆရာလျောက်ပါတယ် ....
အို .. သူက အင်တာဗျူးရမယ့်လူလေ ..
I က Roll 1 ပေါ.နော်။
မီးလဲကျောင်းအပ်ပါတယ် ဆရာများရှင့် web advance ကိုသင်ချင်ပါတယ်...။
ဘယ်ဆရာတွေက ဘာတွေသင်ကြမယ်ဆိုတာလေးကိုရောတိတိကျကျ မသိရဘူးလားရှင်။
သိခွင့်ရရင် သိချင်ပါတယ်နော်။ ^_^
အမ်ဇက် မြို့တော်က အက်တမင် များ ခင်ဗျား။:77:
ကျွန်တော်လည်း Web Design ကို လေ့လာနေတဲ့မွေးကင်းစကလေးဖြစ်ပါတယ်။:26:
အစ်ကိုတို့ အမ်ဇက် ကျောင်းဖွင့်မယ်ဆိုတော့၀မ်းသာသွားပါတယ်။:D
စာရင်းကဘယ်မှာသွင်းရမှာလဲဟင်။ ဒီမှာပဲ စာရင်းပေးကြရမှာလား။ သင်တန်းတွေများလာရင် နဲနဲများရှုပ်လာမလားလို့။ register လုပ်တာလေးကို သေသေချာချာလေးရှင်းပြပေးပါလား။ တက်မယ့်သူအချင်းချင်းလဲသိသွားတာပေါ့။ ကျနော်စိတ်ထင်လူတစ်ယောက်က အတန်းအားလုံးတက်မယ်ဆိုတာ လွယ်ပါ့မလား။ ကျနော်သိပ်မရှင်းသေးလို့ပါ။ နဲနဲပိန်းလို့ဂျာ..:D
ကိုဂျီးတွေ လုပ်ပါအုံး။ ရှင်းပြကြပါအုံး။
ကိုစေတန် register ဖွင့်ပြီးပြီလားတော့ မသိဘူး..။ သူစိတ်လော သွားပုံရတယ်၊ ဆိုက်လိပ်စာပြောဖို့မေ့သွားပုံရတယ်။
ကျွန်တော်တော့ကျောင်းအပ်ပြီးသွားပြီ ။ username က မြန်မာလိုပေးလို့လဲရဘူးနော်။
ကျွန်တော်လဲ ကျောင်းအပ်ပြီးသွားပြီ ခင်ဗျ သင်တာက ဘယ်လိုသင်မှာလဲ ဟင်.
ကျောင်းက အချိန်နဲ့ ကွက်တိလာပြီးတော့ အွန်လိုင်းမှာ ဒါရိုက်သင်မှာလား
ဒါမှမဟုတ် ပို့(စ်) တင်ပြီး ကြိုက်တဲ့အချိန် ၀င်လေ့လာရမှာလား ပြောပြအုံးနော့ ... ဒီမှာ အရမ်းသင်ချင်နေလို့ :d
ကျနော်လည်းကျောင်းအပ်ပြီ .... ကျောင်းပျက်လို့ကောရလား .... စာမေးပွဲရှိမှာလား .... Advanced web cource က basic ပြီးမှတက်လို့ရမှာဆိုတော့ basic တက်ပြီးတဲ့သူမှန်း ဘယ်လိုသိအောင်လုပ်ထားလဲဟင် အတန်းကျော်တက်လို့ရဘူးလား ....
နည်းပညာ စာအုပ်များမှာ နောက်ကျောဖုံးမှာ ရေးရေးထားတယ်ကော .. Reader Level ဆိုတာလေ ..။ သူက ဆိုလိုတာက ဒီစာအုပ်ဖတ်ဖို့အတွက် Reader ရဲ့ Level ဟာ .. Beginner ဆိုရတယ်၊ Intermediate ဖြစ်ရမယ် စတာတွေပေါ့ .. ဘာတစ်လုံးမှ မသိဘဲသူ့စာအုပ်၀ယ်ဖတ်ရင် နားလည်မှာမဟုတ်ဘူးလေ .. သူက အသေးစိတ်ရှင်းပြတော့မှာမဟုတ်ဘူး .. Beginner Level ကျော်ခဲ့ပြီဆိုတော့၊
အဲလိုမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ခုဒီကျောင်းကလဲ ..ဖတ်တာတော့ ကြိုက်တဲ့နေရာ၀င်ဖတ် ဘာမှမသိသေးဘဲ Advanced Level ၀င်ဖတ်ရင် ကိုယ်ဘဲ နားမလည်ဖြစ်မှာပေါ့..။ Basic တန်းတက်ထားပြီးမှ ဆိုရင် အသေးစိတ်ရှင်းပြမထားတဲ့ ဟာတွေအတွက် ကိုယ့်ဘာသာ နားလည်ယူရတော့မှာပေါ့ ..အဲလိုနေမှာပါ ။
စာသင်သားများကို ကိုယ့်ဘာသာ Level သတ်မှတ်ယူစေခြင်တဲ့သဘောပါ။ ဘယ်သူမှလဲ စာမေးပွဲ မစစ်သလို ဘယ်သူမှလဲ အချိန်မှန်အောင် လာတက်ပါလို့ ပြောနေမှာမဟုတ်ပါဘူး .. (အဲသေခြာတော့ သိသေးဘူး )
အချိန်မှန်စရာ မလိုဘူးဆိုတော့ ကြိုက်သွားပြီ.. )
ကျွန်တော် C++ ကို basic သင်ဖို့အတွက် ဆရာ လျှောက်လွှာ တင်ပါတယ်..
လျှောက်လွှာဘယ်မှာ အလကားရမလဲ.. မ၀ယ်ရလောက်ပါဘူးနော်..
အဲ... ဆရာကြီးတွေလာရင် ကျွန်တော် အကူဆရာပဲ လုပ်တော့မယ်..
first year OOP စာအုပ်ထဲကအတိုင်းသာ ချလိုက်ဗျာ.. ကိုစေတန်..
အဲ့ဟာလေးက မိုက်တယ်ဗျ.. basic အတွက်...
zinpaing wrote: »
အဲ ... ဖော်နေပြီ ဖော်နေပြီ ... www.edu.mysteryzillion.org မှာ လာသင်လို့ရနေပြီ.. နောက်မကျစေနဲ့ :P
ကျွန်တော့ comp မှာ ZawGyi Font သုံးတာ sqaure တွေပေါ်နေလို့ ဘာ font install ရမှာလဲဆို တာ ကျေးဇူးပြုပြီ: အကြံအညဏ် ပေ:ပါ :18:
NayMyo wrote: »
ဇော်ဂျီပါဘဲခင်ဗျာ .. IE နဲ့ဆိုရင် မမြင်ရပါဘူး၊ ထုံးစံအတိုင်း FireFox နဲ့ပြောင်းကြည့်လိုက်ပါလား။ မြင်ရမယ်။
ရပြီ... Ie နဲ့ကြည့်လို့ရပါပြီဗျာ
အနော်လည်းသင်မယ်....:):):):) မိုက်တယ်ဗျ ကျွန်တော်လည်း web ပိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။
ကျွန်တော်လည်းတက်မယ်နော်။ သင်ပေးမယ့် ကိုကို မမ ဆရာများ မင်မင် များ မော်မော် များ
ဟုတ်တဲ့အစ်ကို...ရေ.. network engineering ဆိုရင် တော့ ကျွန်တော် အရမ်း၀မ်းသာပါတယ်။
network course လေးပါ တွဲသင်ပေးရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း လေ့လာသင်ယူချင်ပါတယ်။network course ဖွင့်ပြီးဆိုရင် တချက်လောက် ကျွန်တော်ကို P.M ပို့ပေးပါ။ ကျွန်တော်networking ကို စိတ်၀င်စားလို့ပါ။ ကျောင်းဘယ်တော့ အပ်ကမှာ လဲ။ ဘယ်တော့စမှာ လဲခင်ဗျား။ MZ က admin တို့ရေ... ပြောကြပါအုံး...:):)
ကျွန်တော်လည်း Network Course လေး သင် ချင်တယ် ...ဗျာ.. ။ ကျွန်တော့ကိုလည်း အကြောင်းကြားပေးပါဦး..
ဟင့်ဟင့် (:((thread ကိုဖက်လိုက်တာ အစကနေအဆုံးထိပဲ
အဆုံးနားလဲရောက်ရော 16 ရက်ပိတ်ပါပြီတဲ့
အခုဒီနေ့ဖက်တာ 18 ရက်နေ့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ .... :77::77::77:
သင်တန်းတတ်ရမယ်ဆိုလို့ပျော်နေတာကို သေပြီ ... :106::106::106:
ဒီလိုဆိုတော့ ဒို့ MrDBA ကြီးကလေးစားဖို့ကောင်းသွားပြန်ရော ကောင်းလိုက်တဲ့စိတ်ထား နဲ့ အကြံဉာဏ်။ နောင်ဘ၀ ကျ နတ်သမီးတဖက် ၅၀၀ နဲ့စံစားနိုင်ပါစေဗျား ။။:D:D
အင်တာဗျူကို စင်ကာပူတွင် တလှည့် ရန်ကုန်တွင် တလှည့် လုပ်မည်။ :d
ကျွန်တော်တို့ကတော့သားေ၇ပင် ယူလာနော် ဟိဟိ :) တင်ပြပုံမကောင်းရင် သားေ၇ပင်နဲ့ပစ်မှာဗျား။။။။။။။။။
ဘယ်လို၀င်၇မှာတုန်းဂျာ restricted access တဲ့ တားတားနားလည်ဘူး
အင်း.. ဒီ thread က စပြီးသင်ပြီလားဗျို့.. 2008 ထဲက စိတ်ကူးက အခုထိ အကောင်အထည်ပေါ်မပေါ်မသိတော့.. တက်ချင်တာတွေရှိတယ်.. တခြားမှာဖွင့်တာထက် ဒီဖိုရမ်မှာပဲ ဖွင့်ရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်.. မန်ဘာတွေ ဟိုကူးဒီကူးမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့..
သီမီးယဲ အပ်ပါတယ် ... ကျောင်းအပ်ပါတယ်လို့ပြောတာပါ :d
ကျောင်းက ဘယ်နားမှာလဲ ပြောပေးပါအုန်း
Edu က ပြန်စဖို့ရှိသေးလားဗျာ ။ Network+ သင်ဖို့ ဆရာတစ်ယောက်ရှာထားတယ် :P:P
Face Book မှာတော့ ၀င်ပြီးသွားပြီ..... ဘာဆက်လုပ်ရမှာလဲ...
မမားခိုး အဲ့လေ.. မမိုးခါး... ဘာတွေလဲဟင်.... :o:o
စာမေးပွဲပြီးရင်တော့ VB.net နဲ့ ASP.net ကိုသင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်..လျှောက်လို့ ခန့်ရင်လစာပေးမှာလားဟင်:5:
edu ပြန်စဖို့ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော် Oct ၁ ရက်နေ့လောက်တော့ ပြန်ဖွင့်နိုင်အောင် လုပ်ပေးပါမယ်။ wordpress ကိုပဲအသုံးပြုမှာပါ။